३९ वर्षकी महिला जसले जन्माइन् ३८ छोराछोरी
निशान न्युज बैसाख १४, 2076
काठमाडौं । रुवान्डाकी एक ३९ वर्षीया महिलाको ३८ बच्चालाई जन्मदिएकी छिन् । मरियम नबातान्जी नामकी ती महिलाको गर्भाशयलाई असाधारण भनिएको छ । उनले ६ पटक जुम्ल्याहा ,चार पटक उनका तिम्ल्याहा र पाँच पटक ४–४ बच्चा जन्माएकी हुन् । एक पटक ती महिलाले एकैसाथ ६ बच्चा जन्माएकी थिइन् तर् एउटा बच्चाको पेटमा नै मृत...
शनिबार गर्नै नहुने यी ५ काम, गरे...
बैसाख १४, 2076 काठमाडौं । शनिबारको दिनलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने शनिबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।शनिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर शनिबार केही काम गर्न भने निषेध ...
पुरुषले आफ्नो कुन भाग हेरोस् भन्ने चा...
बैसाख १०, 2076 काठमाडौं । कृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक ह...
याद राख्नुस्, दाह्री र जुँगा कुकुरको ...
बैसाख ९, 2076 काठमाडौं । छोरा मान्छेका गहना भने दाह्री र जुँगा हो । तर, दाह्री पाल्ने पुरुषहरुको लागि नराम्रो र दुःखद समाचार पनि छ । वैज्ञानिकहरुले कुकुरको शरीरभन्दा बढी दाह्री पाल्ने मान्छेमा धेरै हानिकारक किटाणु तथा जीवाणु हुने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञान...
किन बढ्दैछ ‘सेक्स एडिक्सन’ को संख्या ?
बैसाख ९, 2076 काठमाडौं । सेक्सले वैवाहिक जीवनलाइ सुखमय बनाउँछ । तर त्यही सेक्स नभई नहुने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यो ‘सेक्स एडिक्सन’मा रुपान्तरण हुन्छ ।अमेरिकाको मिनएसोटा विश्वविद्यालयमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार १० प्रतिशत पुरुष अमेरिकीहरु सेक्स एडिक्सनबाट पीडित...
महिलालाई यौन सम्पर्क गर्न के कुराले म...
बैसाख ९, 2076 काठमाडौं । कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ । किनकी हरेक मानिसका रुची फरक फरक हुन सक्छन् । स्वभाव पनि फरकफरक हुन सक्छन् ।हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको थियो ।...
के तपाई ‘सेक्स’ को निर्देशक र मुख्य क...
चैत्र २६, 2075 काठमाडौं । मनोविज्ञ भन्छन– सेक्सले मानिसका आम व्यवहारलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । अर्थात् यौनक्रियासँग जोडिएका हर्मोनहरुले मानिसका अन्य संवेदना समेत प्रभावित गर्दछ । सेक्स जगतका लागि अनिवार्य जस्तै छ । त्यसमा पनि मानिसका ल...
वीर्य योनीमा खस्दा के महिलाहरु मोटाउँ...
चैत्र २४, 2075 काठमाडौं । पुरुषहरु यौन सम्पर्क गर्दा अधिकांसले वीर्य योनीभित्रै झार्न मन पराउँछन् । यतिसम्मकी महिलाहरु पनि वीर्य भित्रै झरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, वीय योनीभित्रै झार्दा गर्भ रहने डर हुन्छ । वीर्य बाहिर ननिस्किए मोटाइन्छ ...
कुन उमेरका महिला सेक्सप्रति लालायीत ह...
चैत्र २३, 2075 सेक्स सम्पर्क गर्न उमेरले पनि उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । उमेर, समय र वातावरणले मानिसलाई सेक्सका लागि इच्छुक बनाउँछ । तर, कुन उमेरमा बढी सेक्स गर्दा ट बढी आनन्ददायी कुन उमेरमा होला ? चासोको विषय हो । तर, यसबारे एक अध...
अविवाहित युवक विवाहित महिलालाई किन मन...
चैत्र २१, 2075 काठमाडौं । हरेक महिलालाई लाग्ने गर्छ की आफुलाई अविवाहित पुरुषल हेर्दैन र वास्ता गर्दैन । तर, धेरै महिलालाई भर्खरका युवाहरुले मन पराउँछन् भन्ने कुरा सुन्दा अलि अचम्मको र अमिल्दो लाग्न सक्छ तर, यो सत्य हो । विवाहित महिला र ...
यौन सम्पर्कपछि पुरुष किन निदाउँछन् ? ...
चैत्र १४, 2075 काठमाडौं । सामान्यतयाः रातको समयमा यौनसम्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, यौनसम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौन सम्...
कसले गर्छ बढी हस्तमैथुन ? जान्ने पर्न...
चैत्र ५, 2075 काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा यौन सन्तुष्टिका लागि मानिसहरुले साथि खोज्नु भन्दा हस्तमैंथुन वा सेक्स टोयको प्रयोग गरेर यौन आनन्द लिने गरेका छन् । बढ्दो उमेरावस्थासँगैं हस्तमैथुन यौन सन्तुष्टिका लागि एक सामान्य प्रक्रिया हो ।...
एमालेले भन्यो, धनकुटामा माओवादीले गरेको यो जस्तो ठूलो राजनीतिक बेइमानी अरु के हुन्छ र ?